I-aluminiyamu ethengisa i-aluminiyam yesikwere i-baffle yomzi-mveliso weplanga kunye nababoneleli |Zhongming
Isilingi ye-aluminiyamu ye-aluminiyam isetyenziswa ngokubanzi kwi-subway, kwizikhululo zikaloliwe ezinesantya esiphezulu, izikhululo, izikhululo zeenqwelo moya, iivenkile ezinkulu, iipaseji, iindawo zokuzonwabisa, izindlu zangasese zikawonke-wonke, iihotele, iindawo zokutyela zesikolo, iindonga zangaphandle zezakhiwo kunye nezinye iindawo ezivulekileyo.
Umbala: I-RAL, iPantone, iplanga njl
Isilingi yeAluminiyam yesikwere yeBaffle (Iiprofayili ze-aluminiyam yesikwere ityhubhu)
Ukugqithiswa kwesikwere seprofayili senziwa ngokuqhubekayo okanye ukugoba.Isakhiwo sofakelo sisixhobo esikhethekileyo sohlobo lwe-keel snap.Indlela yokufakela ilula kwaye ilungile, ilungele ngaphakathi kunye nokuhlobisa.Imveliso inemisebenzi yokuvula, ukufunxa isandi kunye Uhombiso, kwaye inefashoni yanamhlanje kunye nesiphumo esiqhubela phambili. Ngokutshintsha kobude bephaneli, isalathiso, ukukhanya kunye nombala, isilingi iya kucaca ngakumbi kwaye iguquguquke.
Imveliso Isilingi ye-aluminiyam yesikwere yebhaffle (iiProfiles iAluminiyam yesikwere tube)
Ubungakanani obuqhelekileyo Ububanzi:25,30,40,50,60,70,80mm,Ubude:30-200mm
Ubungakanani obukhethekileyo Ububanzi:100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200mm;Ubude:20-50mm
Umbala Imhlophe, iplanga, iRose Gold, iBlue, iMnyama njl njl
Isimbo Iindonga zamakhethini, iPhaneli yoKwakha uMhombiso wefacade
Umphezulu I-PVDF, Ukwaleka umgubo, iPE
Isicelo Igumbi lokuhlala elihonjisiweyo, ihotele, ibha, njl.
Ngaphakathi nangaphandle indawo yoluntu ngasemva, ikhabhathi ye-Elevator, i-handrail, igumbi lokuhlala, udonga olungasemva, isilingi, izixhobo zaseKitchen.
Ngokukodwa ibha, iklabhu, iKTV, ihotele, iziko lokuhlambela, ivilla, indawo yokuthenga.
Ngaphambili: Isilingi ye-aluminiyam emise okwe-U
Okulandelayo: I-China yenza i-Engle yokuLungisa i-Couplers / i-Clamps ye-scaffolding
Amacandelo e-Scaffolding eRinglock, Plastic Formwork For Column, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack, Kwikstage Scaffolding Accessories,